४ कोठे घर बनाउन कति खर्च लाग्छ ? हेर्नु`होस् – List Khabar
Home / समाचार / ४ कोठे घर बनाउन कति खर्च लाग्छ ? हेर्नु`होस्
४ कोठे घर बनाउन कति खर्च लाग्छ ? हेर्नु`होस्
admin December 9, 2021 समाचार Leaveacomment 272 Views
चार कोठाको एक तले घर बनाउँदा इँ`टामा कति खर्च हुन्छ?हामीले यहाँ कम इँटा प्रयोग गरी कसरी चार कोठे, चिटिक्क`को घर बनाउन सकि`न्छ भन्ने चर्चा गरेका छौं। यसबारे हामी`लाई जानकारी दिएका छन् महाशक्ति इँटा उद्योग, जगाति`का सञ्चाल`क कृष्ण|प्रसाद दुवालले। दुवालका अनुसार इँटा कति लाग्छ भन्ने अनुमान गर्नुअघि सबभन्दा पहिले कस्तो घर बनाउने, कति`वटा झ्याल, ढोका राख्ने निधो गर्नुपर्छ।
किनकी झ्याल, ढोका र घरको डिजाइ|नले इँटा संख्या फरक पर्छ।छत ढलान गरी बना`इने घरमा इँटा बढी लाग्छ। यसमा आव`श्यकता अनुसार तला थप्दै जान पनि स`किन्छ। त्यस्तै पर्खाल सिस्ट`मको ढलान नगरिने, जस्ता वा अन्य छाना राखिने घरमा कम इँटा प्र`योग गर्न सकिन्छ।
सहरमा ढलान`बिनाको घर त्यति प्रयो`गमा आउँदैन। घर बनाउँदा भविष्यमा तला थप्ने विचा`रले बनाउँदा सही हुने इँटा व्यवसायी दुवाल बताउँछन्। ढलान गर्ने घरमा जग बलियो पार्नुपर्छ। नौ इन्चको जग अ`निवार्य हुन्छ। त्यसले धेरै इँटा डिपिसी`मुनि खपत हुन्छ,’ व्यवसायी दुवालले जानकारी दिए, ‘पहिलो तला घरको आधार (मुख्य) पनि भएकाले नौ इन्चकै गारो लगाउन सुझाव दिन्छौं।’
नौ इन्चको गारो लगाउ|नुको अर्को फाइदा पनि छ- घरको भित्री भागलाई ओसबाट जोगाउनु। दुवालका अनुसार जिन्द|गीमा एक पटक बनाइने घरमा सम्झौता नगरेकै बेस्। त्यस्तै इँटाको लागत आकलन गर्ने अर्को पाटो झ्याल र ढोका हुन्।
कुनै कोठामा तीन वटास`म्म झ्याल राख्न मिल्ने हुन्छ। यस्तो को|ठामा इँटा कम लाग्छ। त्यस्तै कुनै कोठामा दुई वटा ढोका राख्न आवश्यक पर्ने हुँदा सोही अनुसा`र इँटाको लागत अनुमान गर्नुपर्ने दुवाल बताउँछन्।
‘तर कम खर्चमा घर बनाउन इँटा मात्रै कम गर्न खोजेर हुँदैन। झ्याल-ढोका पनि आवश्य`कता अनुसार मात्रै राखे राम्रो,’ उनी भन्छन्, ‘इँटाको लागत घटाउन खोज्दा झ्या|लको लागत बढी हुन गयो भने योजना फेल हुन्छ।’
प्रत्येक कोठामा दुइटा झ्याल, एक वटा ढोका राखेर नौ इन्च`को गारो लगाउँदा करिब २८ हजार इँटा माग गर्नुपर्ने दुवालको अनुभव छ। ‘कोठाको आकारअ`नुसार थोरै घटबढ भए पनि सामा`न्यतया ढलान गरेको चार कोठे घर बनाउन एक नम्बरी २८ हजार इँटा भए पुग्छ,’ दुवाल भन्छन्, ‘कम्पाउन्ड र बाँकी काम`का लागि चाहिँ अरू इँटा थप्नु पर्छ।’
यो त भयो ढलान गरी बनाइ`एको घरमा इँटा|को लागत। प`र्खाल मात्रै लगाएर ढलान नगरी घर बनाउने हो भने आठ/दस हजार इँटामै काम सकिने व्यव`सायी दुवा`ल बताउँछन्।
‘पर्खाल मात्र लगा`उनु पर्ने घरको जगमा धेरै इँटा लाग्दैन। भित्री पर्खालमा पनि सिमेन्टको जो`डाइमा पाँच इन्च गारो लगाए हुन्छ। आधाभन्दा कम इँटा खप`तमा घर बनाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गाउँघ`रतिर बना`इने घरमा यो तरिका अपनाइएको हुन्छ।’
अहिलेको समयमा काठमाडौं उपत्य|कामा एक नम्बरी इँटा प्रतिगोटा १४ देखि १६ रूपैयाँमा निर्माण`स्थलमै पुग्छ।माथिको अनुमान अनुसार हिसाब गर्दा ढलान गरिने चार कोठे घर ब|नाउन चार लाख|देखि चार लाख पचास हजार रूपैयाँ बराब`रको इँटा कि`न्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै पर्खाल मात्रै ल`गाएर चार कोठे घर बनाउन इँटा|मा करिब एक लाख पचास हजार रूपैयाँ अनुमान गर्नुपर्छ। कहिले|काहीँ इँटाको मूल्य फरक पर्दा अनु|मानित रकम थोरै तलमाथि चाहिँ हुन सक्छ।
घर बनाउँ|दा खर्च कम गर्न घरमा दुई नम्ब|री इँटा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। दुई नम्बरी इँटा अहिले १२ देखि १४ रूपैयाँमा आउँछ। चार कोठाको एक तले ढ|लान घरमा दुई नम्बरी इँटा राख्दा चार लाख रूपैयाँ हाराहारी मात्र पर्न आउँछ। ढलान नगरिएको घ|रमा पनि एक लाख बीस हजारदेखि एक लाख चालीस हजारसम्म मात्र पर्छ।
तर जिन्द`गीमा एक पटक ब`नाइने घरमा सम्झौ`ता नगर्न दुवालको सुझाव छ। ‘इँटाका प्रकारमध्ये रातोमाटो पोलेर बनाइने एक नम्बरीलाई सबभन्दा राम्रो मा|निन्छ। यसमा कुनै स|मस्या छैन,’ दुवाल भन्छन्, ‘दुई नम्बरी इँटा सस्तो परे पनि गु`णस्तर कम हुन्छ।’ समीक्षा अधिकारीले तयार पार्नु भएको यो सामग्री सेतोपाटी बाट लिईएको हो ।
Previous जाडोयाममा मोजा लगाउँदा हो’सियार, नत्र ज्यान पनि जान सक्छ ! 1 min read
Next विक्की कट्रिनाको विवाहबारे क’ण्ड’म कम्पनीले यस्तो टिप्पणी गरेपछि भयो हंगामा